Soomaalida Sweden oo laga yaabo in Boolis dalkaasi qab qabtaan. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Soomaalida Sweden oo laga yaabo in Boolis dalkaasi qab qabtaan.
Previous articleMandheera iyo jubaland masuuliyiin ka kala socda oo kulan ka yeeshey iskaashiga xaga Amniga.
Next articleGudi loo xilsaarey Qaban-qaabada Aaska EX gen. Maxamed Cali Samatar oo Muqdisho kulan ku yeeshey.